Companieslọ ọrụ SEO na-anwale ma na-ejigharị nsonaazụ ọchụchọ… naanị ya agaghị akwụsị. Matt Cutts nke Google dere nnukwu post, Ihe ire ere na ọdịda blọgụ ndị ọbịa maka SEO na-agụnye vidiyo na nkwụsi ike ya na ịde blọgụ ndị ọbịa na Matt na-enye nke a dị ka akara ya:
Enwere m obi abụọ. The post nwere a ole na ole nke njikọ n'ime ọdịnaya… a ole na ole pụtara ọnyà ma otu bụ kpọmkwem na m bụ nchegbu. Anyị na-etinyeworị njikọ ndị na - enweghị njikọ na ọdịnaya ọpụpụ, mana enweghị m ike ịma jijiji na eziokwu ahụ abụghị ọdịnaya ezubere oke… na njikọ ndị ezubere iche. Abụọ ọzọ isiokwu na-ede akwụkwọ na m nwere na-amalite ime ụfọdụ nnyocha.
Akpatre utịbe utịbe ama anam ndọhọ enye ọnọ mi n̄wedisan̄ oro awatde moto. O dere ma kwuo na obi adịghị ya mma ịnye ozi nzuzo ahụ. Achọghị m maka ozi nkeonwe… ọ gaara ekpuchi adreesị ụlọ ya yana data nkeonwe ọ bụla. Naanị ihe m chọrọ bụ ka a mata onye m bụ. Na nke ahụ, ewepụrụ m njikọ niile na ọkwa ya wee gbanwee nzere nbanye ya.
Ya mere… si ebe a gaa, lee ihe nyocha m:
Nzuzo njirimara - blog a bụ ikike m n'ịntanetị ma achọrọ m ịnọgide na-ekpughere, nkwanye ùgwù na ịdị mma iji debe ma na-eto eto m. Agaghị m etinye ya na ụfọdụ backlinker.
Usoro ojiji - anyị na-ahụ na ndị ode akwụkwọ anyị niile maara ihe mgbaru ọsọ nke blọọgụ anyị - inye ndị na-ere ahịa nghọta ka akụrụngwa na teknụzụ nwere ike isi metụta mbọ ahịa ha. Ọ bụghị ire ma ọ bụ backlink! A ga-ewepụ ọdịnaya ndị ọzọ ọ bụla ma chụpụ onye dere ya.
Ngosipụta zuru oke - ọ bụrụ na enwere mmekọrịta ịkwụ ụgwọ n’etiti anyị, onye dere ọdịnaya, yana akụ enyere na post - a ga-ekpughere ndị na - agụ ya mmekọrịta ahụ. Anyị anaghị eche banyere ịnye ọdịnaya gbasara ndị na-akwado anyị ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ anyị bụ ndị mmekọ maka… mana ndị na-ege anyị ntị ga-amarịrị na enwere mmekọrịta ebe ahụ.
Nofollow - niile njikọ ga-nofollowed na ọbịa posts. Enweghị mwepu. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ iji nweta ma kpughee ya na ndị na-ege anyị ntị sara mbara ma soro - ọ bụghị backlinking maka SEO. Ka anyị debe ihe ndị anyị na-ebute ụzọ.
Egosipụtara Images - ọdịnaya ọ bụla a na-ahụ anya ga-enye ikikere. Ọ bụrụ na onye na - ede blọgụ anyị enweghị ozi, anyị ga - eji nke anyị foto ngwaahịa na ihe onwunwe vidiyo. Agaghị m enweta ụgwọ ịpụnara sitere na ọrụ foto ngwaahịa n'ihi na onye na-ede blọgụ ọbịa jidere ihe oyiyi site na nchọta onyonyo Google.